IBella Vista: Ifulethi elihle kakhulu lihlaziywe kakuhle
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAnne-Laure
Wamkelekile kwigumbi elihlaziyiweyo laseBella Vista elikumgangatho we-2 kwikhaya losapho. Sayifumana 2 '' ukuhamba ukusuka kwisikhululo sikaloliwe 5 '' emnqamlezweni-lizwe ahlala nelamaxandeka, eli yokuhlala ekhululekile, enoxolo ezinamagama features nekhitshi kunye igumbi abahlala kwindawo kwigumbi elinomtsalane eliphangaleleyo kunye eqaqambileyo kunye nophahla omangalisayo somthi no-2 amagumbi okulala, i-mini-mezzanine, igumbi lokuhlambela kunye ne-cloakroom. Ngaphandle kweterrase ilungiselelwe ukukwamkela. Ilungele ukuhlala kwakho.
Ndikunye nomyeni wam isikhokelo seentaba zamaKristu kunye nenkwenkwe yethu encinci, sathandana ngokupheleleyo nentlambo yeGoms. Kusivuyisa kakhulu ukwabelana nawe ngendlu yethu esanda kulungiswa apho sifika rhoqo eholideyini ukuze sityibilize ebusika kunye nokuhamba okumangalisayo lonke ixesha. Siyayithanda le ntlambo entliziyweni yeAlps enikezela ngendalo engonakaliswanga.
Ifakwe umgama wemizuzu emi-2 ukusuka kwisikhululo sikaloliwe kunye nokuhamba imizuzu emi-5 ukusuka kwiindlela zokutyibilika ezinqumla ilizwe, le ndawo yokuhlala itofotofo, enoxolo nenhle, ibekwe kumgangatho wesibini wendlu yosapho ukusukela ngeminyaka yoo-1970, inamagumbi amabini okulala: elinye. lokulala kunye ubungakanani ukumkani elala igumbi elincinane ephilayo lokulala encinane kunye neebhedi ezimbini single. Igumbi lokuhlala elikhulu, elibanzi kwaye eliqaqambileyo liya kukutsala ngesilingi yalo entle eyenziwe ngomthi. Yahlulwe phakathi kwekhitshi langoku, elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye netafile enkulu yokutyela kunye negumbi lokuhlala elinomtsalane, elitofotofo. Umgangatho wamagumbi okulala, ikhitshi kunye negumbi lokuhlala lenziwe ngamaplanga okwenene endalo. Ukusuka kwigumbi elikhulu, unokufikelela kwi-mini-mezzanine ephantsi kakhulu ephantsi kophahla. Imidlalo yabantwana igcinwe apho.
Igumbi lokuhlambela eliqaqambileyo lineshawa, isinki kunye nendlu yangasese.
I-cloakroom ibekwe phambi komnyango wangaphambili ukuvumela ukuba ushiye izihlangu zakho, iibhatyi kunye neebhegi. Khumbula ukuthatha iziliphu zakho.
Uya kuba nokufikelela kumgangatho osezantsi kwigumbi lokuhlambela eliqhelekileyo elinendawo yokugcina i-skis, i-ski kunye neebhutsi zokuhamba kunye neekhonkco ukomisa iimpahla zakho zezemidlalo.
Ngaphandle kukho iterrace enomtsalane ekunika indawo ekhuselweyo. I-terrace ifakwe itafile kunye nezitulo. Indawo emnandi ukonwabela iintsuku ezinelanga.
Ngesicelo, unokufikelela kwindawo evaliweyo yokugcina iibhayisekile zakho zeentaba.
Iifestile kumagumbi okulala omabini zincinci, ziphantsi kwaye zivuleleke ngqo kwiibhedi. Kwigumbi lokulala elincinci unamagwegwe okuxhoma iimpahla kuphela.
Izinyuko zamaplanga kunye nendlu yayihonjiswe ngemifanekiso yomyeni wam: uChristian Dupré, owayesakuba ngumfoti waseSwitzerland owayephila ngelo xesha. Ngaphezu kweminyaka engama-40, ebekhenketha ihlabathi kwaye ebonisa apha uluhlu lwemifanekiso ezotywe kwiphepha lesiNepalese elenza ushicilelo ngalunye lube lodwa kwaye lube nomdla.
Ukucoca kwenziwa ziingcali.
Akukho ilifti okanye umabonakude.
Sikunqwenelela ukuhlala okuhle kakhulu.
Indawo yokuhlala yaseBella Vista ikwindawo ezolileyo, yokuhlala engqongwe ziiraccards zakudala zaseValaisian. Indlu ibekwe kakuhle kakhulu kufutshane nesikhululo kunye neendlela ezinqumlayo ze-ski, kude ne-cantonal road.
Unokuhamba ngeenyawo ukutyelela le ndawo yemveli yelali yakudala kwaye uhambe ngokuzolileyo phakathi kwe-mayens endala kunye ne-mazots, uninzi lwazo olulungiswe kakuhle. Ungaphoswa kukufumana izindlu ezintle zelali okanye uzivumele ukuba ukhuthazwe yimisebenzi yobugcisa yezi cawa zimbini.
Ehlotyeni, hamba ngeenyawo usuka endlwini uye kuhambo olungenakulibaleka kumbindi weAlps, ufikelele kwizindlu ezininzi, uthande umkhenkce oqaqambileyo kwaye ubonise iipanorama ezingafiyo ezifanele amakhadi eposi.
Ummandla ulungele ukuhamba ngebhayisikili yeentaba, unokuhlala ethafeni okanye unyuke intaba, intlambo igcwele iindlela kuwo onke amanqanaba.
Ebusika, kumakhulu ambalwa eemitha ukusuka endlwini, nxiba iibhutsi zakho zokutyibiliza kwilizwe liphela kwaye ujoyine indawo edumileyo yehlabathi yeNordic ski.
Ibala lokudlala elihle elinendawo yebarbecue kunye nebha encinci yokuphumla kukuhamba nje kwemizuzu eli-15. Kwilali, uya kufumana isikhululo sepetroli, iivenkile zokutyela, iikhefi, indawo yokutyibiliza ekhephini, indlela yenkcubeko, ibhanki yaseRaiffeisen, iWalliser Kantonalbank, ibhula, indawo yokubhaka, imyuziyam, ivenkile yezinto zokubhala, ivenkile yeencwadi, iposti. ulwazi ofisi. abakhenkethi, i-ofisi yeposi, ivenkile uboya, ivenkile yezemidlalo, weenwele kunye kwithala leencwadi. I-Coop Shopping Centre kukuhamba imizuzu eli-10.
Ekubeni inamashishini awahlukeneyo obugcisa neenkonzo kunye nabemi bayo abangama-430, iMünster isesisazulu seGoms Valley. Le lali ikwi-1388 m ngaphezu komphakamo wolwandle. Ukongeza kwisikhululo sikaloliwe, uya kufumana kwakhona indawo yokumisa ibhasi. IMünster yidolophu encinci yaseSwitzerland enomtsalane kwiCanton yaseValais, ekwisithili saseGoms, eyayilikomkhulu layo.
Ukulandela ugcino lwakho, ndiza kukuthumela ulwazi olongezelelweyo kunye nekhowudi yokuvula ibhokisi enesitshixo sendlu.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$324
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Goms